Tag: fanamarinana mailaka | Martech Zone
Tag: fanamarinana mailaka
Fanamarinana ny valin'ny fanamarinana ny mailaka
Alakamisy, Septambra 24, 2020 Alakamisy, Septambra 24, 2020 Douglas Karr
Niresaka tamin'ny mpanorina sehatra fanadiovana mailaka izahay, teo amin'ny sehatry ny indostrian'ny fanadiovana ny lisitry ny mailaka. Raha mankany amin'io rohy io ianao dia hahita mpilalao marobe eny an-tsena - maro no nosedraina sy nampiasainay ho an'ny mpanjifanay. Nifandray tamina Neverbounce izahay (mpanohana ny bilaogy ankehitriny) satria nanao asa miavaka ny rafitr'izy ireo tamin'ny fanamarinana ny lisitry ny taratasinay sy ny
Alahady Oktobra 28, 2007 Alatsinainy, Novambra 3, 2014 Douglas Karr
Alarobia, Oktobra 10, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Jereo ny horonantsary. Mila mitia an'i Markku ianao, indrindra ny fikasana hanipy fomba discus! Misaotra an'i Phil Schwarzmann ao amin'ny Nokia nampahafantatra ahy ny momba ilay horonantsary viraliny mahatsikaiky!